Home » Akụkọ Gọọmentị na Ọha na-ahụ Maka Ọha na Ọha » Kenya na-akwado mmekorita nke ndi mmadu na ndi mmadu iji gbochie esemokwu nke umu mmadu
Mịnịsta ala Kenya maka njem nleta na anụ ọhịa Mazị Najib Balala
Kenya na-atụfu oke ọhịa maka esemokwu anụ ọhịa mmadụ karịa ịchụ nta. Anyi choro ihuoma nke ndi mmadu, Kenya Secretary of Tourism & Wildlife Najib Balala kwuru taa.
Onye odeakwụkwọ Cabinet nke Kenya maka njem nleta na anụ ọhịa, Najib Balala, akpọkuola ndị nwere oke ọhịa na nchekwa nchekwa ka ha na gọọmentị rụkọọ ọrụ iji kwalite mmekọrịta ọha na eze na ịbelata esemokwu ụmụ mmadụ na anụ ọhịa.
“Igationzọ mgbochi dị mkpirikpi. Mkparịta ụka a kwesịrị imikpu miri emi gbasara ego, nkewa, na itinye mkpebi siri ike mana mkpebi dị oke mkpa maka ichekwaba anụ ọhịa anyị. Ka obodo uwa nile kwado mbo niile a na-echekwa enyí n'okwu na otua, ”Balala kwuru.
CS kwuru nke a ụnyaahụ n'oge webinar hụrụ nyocha na mkparịta ụka nke 'Living on the Edge', ihe nkiri vidio nke Black Bean Productions gosipụtara nke gosipụtara nsogbu nke nsogbu mmadụ-Elephants nke Africa.
Webinar ahụ, nke Elephant Protection Initiative's Foundation (EPIF) duziri mmekọrịta nke gọọmentị, Dr. Winnie Kiiru, gosipụtara mkparịta ụka site na ndị na-eme iwu gbasara anụ ọhịa na nchekwa, ndị ọkachamara, ndị ọchụnta ego na ndị na-achịkwa gụnyere:
Prọfesọ Lee White, CBE: Mịnịsta nke oke ọhịa, Osimiri, Gburugburu ebe obibi na Mgbanwe Ihu Igwe, Gabon
Greta Lori: Director nke Mmemme Mmemme, EPIF
Grant Burden: Onye Ndụmọdụ Pụrụ Iche Maka esemokwu enyí enyí mmadụ, EPIF
N'ikwu okwu n'oge webinar, Prọfesọ White kwuru na mgbanwe ihu igwe na-emetụta ọnụ ọgụgụ enyí na-eme ka ha hapụ ebe obibi ha ịga chọọ nri na ebe obibi mmadụ.
Grant Burden n'onwe ya, kwusiri ike na ọ dị mkpa ịgụnye obodo dị iche iche mgbe ha na-ekwurịta banyere azịza ga-adịte aka maka esemokwu ụmụ mmadụ na anụ ọhịa.
N’ileba anya n’okwu Mr. White, Greta Lori kwughachiri otu mgbanwe mmadụ, ọrụ ugbo, mmepụta ihe, na mgbanwe ihu igwe siri emetụta anụ ọhịa, yana mkpa ịkọwa ụzọ ọhụrụ anyị ga - esi soro ha biri n’udo.
CS Balala kwusiri ike n'okwu gbasara imechi ahịa Ivory na European Union na Japan n'ihi na ịsị na ahịa ndị a bụ ihe kachasị egwu na nchekwa nke enyí.
“N’afọ 2020, achọpụtara rhinos 0 na enyí 9 na Kenya. Nke a bụ nnukwu ihe iji chekwaa anụ ọhịa anyị. Agbanyeghị, anyị na-efunahụ ụmụ anụmanụ karịa n'ọgba aghara ụmụ mmadụ na anụ ọhịa karịa ịchụ nta. Ya mere, anyị kwesiri idozi okwu a ugbu a ma ọ bụ na anyị ga-atụfu ihu ọma nke ndị mmadụ nke ga-eweta mbibi nchekwa Elephants, "Balala kwukwara.
CS kwuru, mgbe anyị tufuru ihu ọma nke ndị mmadụ, mgbe ahụ, usoro nchekwa nchekwa niile ga-efu. Nke a bụ ihe mere anyị ji kwesị ime ihe ugbu a, iji chebe ndị mmadụ na itinye ego n'ime mgbochi ọgụ ụmụ mmadụ na anụ ọhịa na-adịte aka ma na-eme ka ndị mmadụ chee na echekwara ha pụọ ​​n'ọhịa.